हवाई जहाज ग्राफिक्स
हल हवाई जहाज ग्राफिक्स
6 महिना2सप्ताह पहिले #1203 by फजला 86
मलाई केहि सोध्नु छ।
म वास्तवमा FSX प्ले गर्न चाहन्छु, तर केही ग्राफिक समस्याको कारण डाउनलोड गरिएका केही फाईलहरू दृश्यात्मक छैनन्।
मैले मेरो समस्याको फोटो हेर्नको लागी राखें। मेरो हो, किनकि मसँग विन्डोज 10 र प्रत्यक्ष X 11 छ?
केही सल्लाह कसरी समाधान गर्न सकिन्छ? मैले ए-एक्सएनएक्सक्स, ए-एक्सएनमक्स र धेरै अन्य जस्ता विमानहरू देख्न सक्दिनँ।
धन्यवाद, कसैले मदत गर्छ।
एक राम्रो भर्चुअल उडानहरू छन्!
6 महिना2सप्ताह पहिले #1204 by raffa203
नमस्कार, तपाइँलाई सेटिङमा "सीधा x10 पूर्वावलोकन" विकल्प बन्द गर्न आवश्यक छ